URonaldo Luis Nazario de Lima Ibali lokuBantwana kunye ne-Untold Biography
ikhaya ISIQINISEKISO SE-CLASSIC FOOTBALLER URonaldo Luis Nazario de Lima Ibali lokuBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
I-LB ibonisa iNqaku elipheleleyo leLigosa lebhola eyaziwa ngokuba yiNickname; 'Fenomeno'. I-Ronaldo Luis Nazario de Lima Ibali lokuBantwana kunye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti epheleleyo yeziganeko eziphawulekayo ukususela ngexesha lokuzalwa komntwana. Uhlalutyo lubandakanya ibali lobomi bakhe phambi kobuqili, ubomi bentsapho kunye ne-OFF kunye ne-ON-Pitch eyaziwayo into eyaziwayo ngaye. Qalisa.
URonaldo Luis Nazario de Lima Ibali lokuBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Ubomi boBantwana bokuqala
URonaldo Luis Nazario de Lima Ubungqina beNtwana
URonaldo Luis Nazario de Lima wazalwa ngo-18th kaSeptemba 1976 eRio de Janeiro, eBrazil nguyise, u-Nelio Nazario de Lima, uSrr nonina, uSonia dos Santos Barata. Wayengumntwana wesithathu walo mbhangqwana.
URonaldo Luis Nazario de Lima wayevela kwintsapho ehluphekileyo eyayilwela ukumthumela esikolweni. Wayeqatshelwa njengengxaki yomntwana kwiminyaka yakhe yokukhula ngokubanzi kwimimandla yezifundo. Inkqubela yakhe kunye nokusebenza kakuhle esikolweni kufinyelele kwisigxina sazo kwaze kwafika iminyaka ye-11 xa kungalindelekanga. Abazali bakhe, u-Nélio Nazário de Lima noSônia dos Santos Barata, bahlukana baze bahamba ngeendlela ezahlukeneyo xa wayengu 11 kuphela. Ngenxa yokuba kungekho namnye onokumnakekela, uRonaldo Luis Nazario de Lima kwafuneka aphume esikolweni. Ngaloo xesha, indlela yodwa yokufumana imali encinci yayikudlala imincintiswano yebhola yebhola. Ufumene uthando kwibhola ekhatyweni lokusinda.
URonaldo Luis Nazario de Lima Ibali lokuBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Ubudlelwane noBomi boBomi
Ubomi bobudlelwane bukaRonaldo Luis Nazario de Lima buya kuluntu ngonyaka wonyaka we1997 xa wadibana nomzekelo waseBrazil kunye nomdlali Susana Werner ngubani owamhlonela kwi-popula yaseBrazil enopopu ebizwa ngokuthi 'Malhacao'.
Ulwalamano lukaRonaldo noSusana Werner
Isicelo sakhe sokuba siboniswe kwii-episodes ezintathu savunywa. Bobabini bathandana xa bedibana. Oku kwabangela ubuhlobo besikhathi eside obude kwada kwaqala ukuqala kwe1999.
Ukuphela kolwalamano olulodwa kuthetha ukuqala komnye kumdlali ozama ukuzifumana ephezulu kwindoda yamadoda omfazi. Kamva ngaloo nyaka, uRonald wathandana nomdlali webhola yaseBrazil waseBrazil uMilene Domingues.
Ulwalamano lukaRonaldo noMilene Domingues
Akuzange kuthathe ixesha ngaphambi kokukhulelwa. Emva kokubona ukuba ukhulelwe, uRonaldo wamthabatha. Bobabili batshata ngo-Ephreli, i-1999. Ngo-6th of April 1999, uMilene wazala unyana kaRonaldo wokuqala, uRonald eMilan.
URonaldo noMilene, bamkela umntwana wabo
Umtshato wabo wahlala iminyaka eyi-4 emva kokuba bahlukana.
Ku-2005, uRonaldo waxhamla kwi-model yaseBrazil kunye ne-MTV Star uDaniela Cicarelli okhulelwe kodwa waphulelwa kwesisu.
Ubuhlobo babo bebufutshane. Kwaphela kuphela emva kweenyanga ezintathu emva komtshato wabo oqaqambileyo obiza i-£ 700,000.
Ngaloo nyaka 2005, uRonaldo wenza vavanyo lwabazali kwaye waziqinisekisa ukuba unguyise wenkwenkwana egama linguAlexander.
Le nkwenkwe yazalwa emva kobudlelwane obusondeleyo phakathi kukaRonaldo noMichele Umezu, umlungiseleli waseBrazil uRonaldo wahlangana okokuqala eTokyo, kwi-2002.
Scandal: Ngo-Ephreli 2008, uRonaldo wayebandakanyeka kwintlekele ebandakanya ezintathu umthamo izihenyukazi adibana nazo kwi-nightclub e-city of Rio de Janeiro. Xa befumanisa ukuba babesemthethweni ngokomntu, uRonaldo wabanika i-$ 600 ukuhamba. Omnye wabathathu, ngoku u-Andréia Albertini ufile wafuna i-$ 30,000. Kamva wachaza ityala kumaphephandaba. Umtshato wakhe kuMaria Beatriz waxoshwa ngokukhawuleza emva kokugxeka. Emva kokucaciswa okukhulu kwimiba, ulwalamano lwabo lwaqala kwakhona. Ngeli xesha, uthando lwabadla.
Uhamba naye esidlangalaleni kwaye ihlabathi lonke liyazi ukuba liya kuphinda liphange.
URonaldo noMaria (Uthando lobomi bakhe)
Nge-24th December ngo-2008, uMaria Beatriz Antony wazala intombi yabo yokuqala, uMaria Sophia, eRio de Janeiro.
Ngo-Ephreli 2009, intsapho yonke yafudukela entsha ngendlu eSão Paulo. Ngo-6 Ngo-Ephreli 2010, uMaria Beatriz Antony wazala intombi yabo yesibini, uMaria Alice eSão Paulo. Ngokuqinisekileyo, uMaria Alice wazalwa ngosuku olufanayo, kwiminyaka eyi-10 emva kokuba umzalwana wakhe omdala uRonald azalwe.
Emva kokuqinisekiswa komntwana wakhe wesine, uRonaldo wathi kwi-6 Disemba 2010 yokuba wayenayo vasectomy, "ukuvala ifowuni", uvakalelwa kukuba unabantwana abane banele.
URonaldo Nazario de Lima kunye neNtsapho
URonaldo Luis Nazario de Lima Ibali lokuBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Ulwalamano noNyana wokuqala, uRonald.
Zizona zihlobo ezilungileyo. Akukhokho ukungaqiniseki malunga nobukhulu babo. Akukho zintlungu ezingabonakaliyo phakathi kukaRonaldo (uyise) noRonald (uNyana).
Nje ngoNyana Ofana noBawo-Ronaldo noRonald
URonald ufumana uninzi kubaba wakhe ngokukodwa kwisakhelo sokubonelela, ukukhulisa nokukhokelwa.
URonaldo Luis Nazario de Lima Ibali lokuBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Ekuqaleni kuqala kwibhola
Ukuqala kukaRonaldo kwiqhola
Ngezinye iinyanga ze-6 emva kokuba athathe ibhola, uRonaldo Luis Nazario de Lima waba ilungu eliqhelekileyo lemibala yebhola ehlelwe kwindawo yakhe. Wafumana inkxaso epheleleyo kubahlobo bakhe nabamelwane ababezazi iziganeko zakhe baze bafune ukuba aqhubele phambili ngokukhawuleza. Olu qalisa ukuqala kwebhola elaliqala kwizitrato zeBento Ribeiro, ummandla waseRio De Janeiro. Kwakhona yindawo apho ukuphakama kwakhe kwinto ephakamileyo kwibhola lebhola lehlabathi laqala.
URonaldo wasebenzisa onke amathuba anikezelweyo ukubonisa izakhono zakhe zesitalato eziguqukayo kwintsimi. Umsebenzi wakhe onzima wahlawulwa njengoko wahlonywa ngumlingo waseBrazil uJairzinho owayengowomqeqeshi webhola kunye nokuhlola. Emva kokunikela ubungqina bakhe, uJairzino wacebisa umnyaka we-16 ubudala kwiqela lakhe langaphambili leCrozeiro.
Ngexesha lakhe lokuqala neqela, uRonaldo waqhekeza irekhodi ngokufaka iinjongo ze-44 ezimangalisayo kwiimidlalo ze-44. Ukukhawuleza kwakhe, ukulungelelaniswa kwamandla kunye nokulawula okufutshane kunye nekhono lokukhangela yonke i-football pundits kunye nabalandeli. Ukusebenza kwakhe okuqhubekayo kwandinceda iqela kwi-First Cup yobukhosi beBrazil kwi-1993. Ngesinye isikhathi, wonke umntu waqala ukumbiza ngokuthi 'New Pele ' Ngombulelo kwipatheni yakhe yebhola efana nePele xa eqala ngexesha elifanayo ngo-1958. Kwathatha ixesha elifutshane ngaphambi kokuba uRonaldo athole ukuhlonelwa kwesizwe esikhulu kwi-tender ye-17.
UMoreo, umsebenzi wakhe wamnika ithikithi ngokuzenzekelayo kwikomiti yehlabathi ye-1994 eyayibanjelwe e-United States. Nangona wayebukele ukhuphiswano ebhentshini njengoko abantu belizwe lakhe bawina iNdebe.
Ngokukhawuleza, ilizwi likaRonaldo elithemba elikhulu liye lafikelela kumaxweme aseYurophu ngenxa yokufakwa kwakhe kwiqela le-World Cup ye-1994 yaseBrazil, kwaye ekugqibeleni wagqithwa yiPiet De Visser omkhulu, wabuya njengomnye wabadlali abahamba phambili kwibhola eliye lafumana uRonaldo uhlanga lwaseRomário.
Ukusebenza kwakhe kwinqanaba lasemgangathweni kwamphumelela kwi-PSV Eindhoven emva kweNdebe yehlabathi.
URonaldo wamkela ngenxa yokuba kwakuyinto yabadlali baseBrazil bazama ukuya eHolland okanye eFransi ukuze bafunde umdlalo waseYurophu ngaphambi kokuba bahambe. URonaldo utshitshise umhlaba xa isivumelwano sakhe sithengiswa kwi-PSV Eindhoven e-Netherlands kwi-1994, ubuninzi malunga nomgomo ngamnye ngomdlalo ngokubhekiselele kumncintiswano we-Europe.
Wachitha amaxesha amabini kwi-PSV Eindhoven ngokufaka amanqaku e-54 kwimidlalo ye-57.
URonaldo Luis Nazario de Lima Ibali lokuBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Unyaka okhumbuleyo 1996
Kwakuhlobo lwe1996. Unyaka apho kwenzeka izinto ezininzi. Unyaka uMichael Johnson wathola igolide ephindwe kabini kwiiOlimpiki zaseAtlanta. Ngonyaka iNgilani yayibanjwe kwaye yaphantse ifinyelele ekupheleni kweMidlalo yaseYurophu. Ngonyaka iintlobo ezintlanu zeengxaki ezibizwa ngokuba yi-The Spice Girls zavulwa zisitshela into ababeyifunayo, into ababeyifunayo ngokwenene. Unyaka u-Hotmail usanda kuqulunqwa. Ngonyaka u-Fugees wasibetha ngokukhawuleza ngale ngoma. Ngonyaka uNelson Mandela wayehamba njengongqongqoshe waseMzantsi Afrika. Unyaka uNkosana uCharles Diana wayesayine amaphepha omtshato.
Kwakuyiminyaka igama elithi Ronaldo Luis Nazario de Lima laba libizo lomzi ekuqwalaselweni kwehlabathi. Lo ngumnyaka weBrazil ulandele inkunzi ye-19 eneminyaka engama-18 ubudala (uRonaldo Luis Nazario de Lima) esuka kwi-PSV Eindhoven onokuyiphumelela iinjongo zokuzonwabisa.
Kwakukho ngeli xesha uSir Bobby Robson kunye Jose Mourinho wasebenza noRonaldo njengomphathi weBrazil nomphathi oncedisayo.
U-Ronaldo uza kuhlala kunye neBarcelona ngexesha elilodwa, kodwa wayenempembelelo echazayo ngexesha lakhe kunye neqela.
URonaldo ukhokela iqela kwi-UEFA Cup Winners 'Cup kunye noCopa del Rey.
Wena uza kuhlala kunye neBarcelona ngexesha elilodwa, kodwa wayenempembelelo echazayo ngexesha lakhe kunye neqela. Ufumene iinjongo ze-47 kwiimidlalo ze-49 kwaye waba ngumdlali omncinci kunanini na oza kunqoba umdlali wehlabathi we-FIFA wonikezelo wonyaka, irekhodi ekhoyo ngoku.
Ngeminyaka eyi-20 ubudala, uRonaldo wayebonisa umgangatho wokugqiba ihlabathi elingakaze libonwe ngaphambili.
Ngamazwi akhe ... "Ndiyakuthanda ukubala amanqaku emva kokudlula bonke abakhuseli kunye nomgcini. Oku akusiyo okhethekileyo, kodwa umkhwa wam. " - URonaldo.
URonaldo Luis Nazario de Lima Ibali lokuBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -I-Inter Milan Call
Imali yaqala ukuthetha kwibhola e-1998 ngonyaka. Ngaloo nyaka, i-Barcelona yamkela i-world record ye-£ 18 yezigidi ezivela kwi-Inter Milan kwiRonaldo.
Akunakuze uphinde uhlawule kumngeni, uRonaldo wenza ukufudukela kumaqhosha aseItaly. Ixesha lakhe lokuqala laliyinto efana neli lizwe elilindelwe kumdlali weenkwenkwezi - ezinye iinjongo ze-34 zilandelwe, kwaye ezinye iirekhodi zaphulwa.
URonaldo waba ngumdlali wokuqala ukuba aphinde abuyele emuva kumdlali we-FIFA World Player we-Awards, ngeli xesha echaza iBallon D'or.
URonaldo Luis Nazario de Lima Ibali lokuBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Iimali zokugqibela zeNdebe yeHlabathi ye-1998
Ukufikelela ekupheleni kweNdebe yeNdebe yeHlabathi, oye wadlala kwi-1998 phakathi kweBrazil neFransi ayengenakho ukubhala. Ngelixa iBrazil ikhangele ukukhusela isithsaba abayifumene kwi1994, iFransi yayidlala ekhaya, ifuna ukuwuthabathelisa i-Golden trophy okokuqala. Umdlalo uphinde wabona iimbali ezimbini zithatha omnye nomnye, kunye noZinedine Zidane begubungele iBrazil Ronaldo, yena ngokwakhe owayebandakanyekile kwimpikiswano emnandi eyashiya bonke abalandeli bakhe bedidekile.
Cinga ngolu hlobo- uRonaldo, inkwenkwe yaseBrazil, owayekulindeleke ukuba akhokele kwicala ngokubhekiselele eFransi wagula emva kweeyure nje ngaphambi komdlalo.
Ezi ngxelo zikhawuleza zenzelelwe ngamabali amasha umbulali wayejongene nesisu esicasulayo. Izizathu ezingakumbi ziye zavela, ukusuka ekutyeni kokutya kwiingxaki zomntu ebomini bakhe bothando. Ekugqibeleni, inyaniso ekhohlakeleyo yaboniswa ngudokotela weBrazil uLiedio Toledo: URonaldo uye wabuyela esibhedlele emva kokuxhalabisa ebuthongweni bakhe ngobusuku ngaphambi kokugqibela.
Uye wehla kwiqela lokuqala waza wanyuka esibhedlele kuphela ukuba abuyele ngokuphawulekayo kwiqela lemizuzu phambi kokukhaba.
Nangona kunjalo kwakukho enye i-twist kwi-story. Esikhundleni sokuqhayisa iBrazil kwiNkqantosi yeNdebe yeNdebe, uRonald akazange akwazi ukugubha ukugula kwakhe kunye nomsebenzi ongaphantsi kwendlela eyenziwa ngumdlali owamvumela u-Zinedine Zidane ukuba athole amanqaku amabini ehamba phambili eFransi kwi-3-0 eyinqola yeBrazil.
"Silahlekelwe yiNdebe yeHlabathi kodwa ndanqoba enye indebe - ubomi bam" - URonaldo (malunga neyokugqibela kweNdebe yeHlabathi ye-1998)
URonaldo Luis Nazario de Lima Ibali lokuBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Indaba yokuLawulwa
Abaninzi bebhola bebhola bebhola baye babenobungozi bokufa. UMichael Owen, umntu owayesoloko wayesatshiswa ngenxa yokuhamba kombane, wabhekana nokulimala okufanayo njengoRonaldo kwaye akazange abuyele kuba ngumyinge umdlali obekade ekhona. UPaul Gascoigne, i-Tiger woods, uJoe Cole, uGary Neville kunye nabanye abagijimi abaninzi baye bafumana ukulimala komsebenzi kwaye abanakuze babuyele kwindlela yabo engcono.
Kukho umgca omncinci ohlukanisa olukhulu, ukusuka kwabanye. Ngokuqinisekileyo ngumsebenzi onzima ukuba ube ngowona nto. Yintoni enzima? Ukuze ube ngowona mhle, wehla, ubhalwe phantsi uze uvuke ukuze ube ngowona nto. Le ngxelo yengozi uRonaldo Luis Nazario de Lima.
I-1998 WORLD CUP INJURY AND COMEBACKWalimala ngokubambisana nomgcini waseFransi, uBarthez kwikomiti yehlabathi ye1998.
Kamva wabuyisela kuBarthez, oye wangena wenzakalisa kwikomityu yehlabathi ye98, eneqhinga elimangalisayo eliya ku-Manchester United elimzuze ukuba ahlale e-Old Trafford ethembekileyo.
I-1999 / 2000 INJURY AND COMEBACK- NgoNovemba 21st I-1999, ubuhlungu bubuyiselwa kwakhona, njengoko uRonaldo ephule isithanga semidolo ngelixa edlala kwi-Serie A ukulwa noLecce.
Emva kokuhlinzwa kunye neenyanga ze-5 zokuvuselela, iBrazil yenza ukubuyela kwakhe ekupheleni kweCoppa Italia ngokumelene neLazio, kodwa nayiphi na ithemba le-fairytale libuya emva kokuxhatshazwa kweyesibini, ukulimala kona kwimizuzu efanayo emva kwemizuzu eyi-7 kwintsimi . Wathwalwa ngumqambi.
Akayi kudlala kwakhona kude kube sekupheleni kwexesha le-2001 / 2002. Ngenxa yoko, wayephelelwe unyaka. Wabonakala kuphela kwimidlalo elishumi elinesibhozo kwaye wabamba kuphela iinjongo ze-7 ze-Inter ngaloo nyaka.
URonaldo Luis Nazario de Lima Ibali lokuBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -I-Post Inter Milan Era
Emva kokuba abuyele, uRonaldo wenza inzame eyaneleyo yokunyanzela umphathi waseBrazil uLuiz Felipe Scolari ukuba amfake kwiqela lakhe leNdebe Yehlabathi ye-2002 eJapan / eKorea. Emva kokuphucula umdlalo wakhe ukuze athathe indawo yokuthembela kwakhe kwizantya kunye nobugwenxa, uRonaldo wayengumdlali ohlukileyo kwixesha lakhe lokulimala. Wathembela ngakumbi ngamandla kunye nokuphucula iso lokujolisa. Oku akufumene ngamava. Wavusa indlela yakhe entsha yokudlala kwimpembelelo ephazamisayo-ekhokela eBrazil ukuya ekugqibeleni kwakhona kwakhona kunye neJalimane. Yonke inkulumo eyayingaphambi komdlalo igxile kwiRonaldo ukunqoba iidemon zayo kwi-1998 - kwaye yabanqoba.
I-Brazilian ivule indlela yakhe entsha kwikhobe yehlabathi ye-2002 ukuba yenze umonakalo apho iholele eBrazil ukuya kwelinye indebe yehlabathi yokugqibela kwaye ifumene iinjongo ze-2. Ufumene iinjongo ze-8 kulo mqhudelwano waza wamphola iMVP. Kwakhona wanqoba umdlali wehlabathi weFifa kunye noLaureus babuyela kumvuzo wonyaka kulo nyaka.
Ukusebenza kwakhe kwamfumana enye yemali yokudlulisa irekhodi yehlabathi, ngeli xesha i-39 yezigidi, njengoko iMal Madrid yongezelele kwi-Galacticos. Nangona bekunye kwada kwaphakathi kwe-Oktobha, abalandeli baseMal Madrid bawamkela uRonaldo nge-heroes reception-edlala igama lakhe kwimigangatho engazange abe khona kwaye aphule iirekodi zokuthengisa iimpahla. Ukwenza oko wayesoloko esenza okulungileyo, uRonaldo wabonga abalandeli ngeenjongo ze-2 ekuqaleni kwakhe. Waqhubeka nokunikela iinjongo ze-30 endleleni yokuwina iLa Liga ngeMadrid.
Naphezu kokulimala, Ronaldo uya kuhamba amanqaku e-104 kwiimidlalo ze-184 zaseMadrid ngaphezu kwexesha le-5 iminyaka kwiqela.
URonaldo Luis Nazario de Lima Ibali lokuBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -I-Post Madrid Era (I-Crisis Injury ne-Returnback)
URonado akazange amthande umphathi weMadrid uFabio Capello ngo-2006, kwaye emva kokusayina kukaRuud Van Nistelrooy waseManchester United, imihla yakhe eBernabeu yabalwa.
Ngomhla kaJanuwari 27th 2007, uRonaldo wasayina kwi-AC Milan kwixabiso elingu-€ 7.5 yezigidi.
Ngomhla kaFebhuwari 13th 2008, kumdlalo weligi kunye neLiborno, uRonald wadluliselwa ensimini emva kokuxhatshazwa kwegciwane le-kneecap emva kokuzama ukuphula ibhola.
Kwakungowesithathu uRonaldo ahlupheke ngengozi enjalo, kwaye kungengowona owaziwayo waseLilan Fitness Lab wayenethemba elinalo lokuba aphinde abuyele - UMilan akazange avuselele isivumelwano sakhe ekupheleni kwexesha ngaphandle kokufaka iinjongo ze8 kwimidlalo ye-20.
Ngo Ronaldo, "Ubomi bam buhlala bube ngumceli-mngeni kwaye ndilungiselelwe ngokwengqondo, kodwa lo ngumngeni omkhulu kunobomi bam." - URonaldo
Ukuphuma kwesenzo esingaphezu konyaka, uRonaldo wathembisa ukubonisa ubungqina bomntu wonke aze abuyele kwintlungu yakhe yesithathu. Ukubuyela ezweni lakubo wabona uphawu lwe-superstar lwabaKorinte, apho wathola khona amaqhawe ayamkela xa evula.
Ngaphandle kokuba iinyanga ezili-13, uRonaldo wancedisa kwiinjongo ze-30 kwiimpawu ze-55, ekuncedeni iqela lakhe kwiqonga kunye nekombe kabini. Kukho kwakhona iifowuni ezivuselelwe ukuba abuyele kwiqela leBrazil kwakhona kwiNdebe Yehlabathi ye-2010. Oku akuzange kwenzeke.
URonaldo Luis Nazario de Lima Ibali lokuBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -UkuLawula iNdebe yeHlabathi yeNdebe
URonaldo wadlala kwiNdebe yehlabathi ye-2006 nangaphandle kokungabaza okuphakanyiswayo ngenxa yokuqina kwakhe kunye nobunzima bakhe. Wagqiba ukuphula i rekhodi kaGerd Muller waza waba ngumgca wekombe wehlabathi jikelele ngeenjongo ze-15.
Ufezekisile oku oku, kunye nenjongo yoshishino ngokumelene neGhana ngoJuni 27th, ekubanjeni injongo yakhe ye-15th kwimidlalo yokugqibela yeNdebe yeNdebe. IBrazil iya kupheliswa yiFransi kwikota yokugqibela.
URonaldo Luis Nazario de Lima Ibali lokuBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Ukujongana neengxaki zobunzima
URonaldo, unzima ukufumana ubunzima obuninzi kwixesha elizayo lomsebenzi wakhe.
Uviwo lwezonyango luye lwabonisa ukuba une-hypothyroidism-isifo esichaphazela umzimba we-metabolism.
Ngo Ronaldo, "Ekuhloleni kwonyango, ndafumanisa ukuba ndijamelene nesikhalazo esibizwa ngokuba yi-hypothyroidism, esicothayo isisombululo sakho, kwaye ukulawula kufuneka ndiyithathe i-hormone engavumelekile kwinqwelo-moya ngenxa yokuchasana nokutshatyalaliswa kwemithetho. Ndizoyika ukuba umsebenzi wam usondele. "
URonaldo ke wathembisa abalandeli bakhe ukuba baqhubeke bekulwela ukulahlekelwa kwesisindo. Wena, Akazange abanikeze isiqinisekiso. Kwesinye isikhathi, kwafika kuwo wonke umntu ukuba lonke ithemba lilahlekile emva kokumelana nzima.
Akazange asebenze nzima ngokwaneleyo ukuze aphinde aphinde aphinde aphinde abe nomumo.
URonaldo Luis Nazario de Lima Ibali lokuBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Ukumemezela wakhe umhlalaphantsi
Umdlali wehlabathi we-FIFA wonyaka weRifa u-Ronaldo wamemezela umhlalaphantsi wakhe kwinqanaba lebhola ngoMsombuluko othile kwinto ebizwa ngokuba yinkomfa yenkomfa yecala eyayiqeda umsebenzi wakhe we-18. URonaldo wagqiba ekumemezele umhlalaphantsi wakhe ngoFebruwari 2011.
Ngokutsho kukaRonaldo- "Umsebenzi wam wawumhle kwaye uyamangalisa. Ndinezoninzi ezininzi kodwa ndinqobile ukunqoba. Kunzima ukushiya into eyenze ndivuyiswe. Ngokwenene, ndifuna ukuqhubeka, kodwa kufuneka ndivume ukuba ndilahlekile kulwa wam umzimba.
URonaldo Luis Nazario de Lima Ibali lokuBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Ihlabathi elingenabulungisa (Ukumfanisa noCristiano Ronaldo)
Into yokuqala efika engqondweni yethu xa umntu ekhankanya igama elithi Ronaldo nguCristiano Ronaldo, Cr7, Cr9. ULuis Nazario De Lima URonaldo udla ngokubhekiselwe kuwo, 'I-Fat Ronaldo', 'iMota (amanqatha) uRonaldo', 'uMottai (u-bald) uRonaldo', 'Izinwele eziqhenqileyo zithinte i-ronaldo', 'Enye uRonaldo'.
Amaninzi amaninzi kaRonaldo de Lima ngokwenene aziva ephazamiseka xa umntu omkhulu njengalowo uncitshiswe kumazinga aphantsi kwaye akakhunjulwa oko akufezile, kodwa ukuba ungakanani ubunzima okanye ubunwele bakhe. Le ngenye yezizathu zokuba uBomiBogger uthathe isigqibo sokuba athathe ixesha kwaye abhale ngomdlali othe waba ngumphefumleli omkhulu kunabalandeli.
Ngoku siyakucela, ngaba uya kukukhumbula uRonaldo ubunzima bakhe, okanye umlinganiselo wokulinganisa umgomo? Ngaba uya kumkhumbula ngenxa yezinto azenzileyo kwizinwele zakhe okanye into enokuyenza ngeenyawo zakhe?
Ngexesha elizayo xa umntu ethi Ronaldo, ngaba uya kucinga ngomdlali wePutukezi ophumelele umvuzo welifa lomhlaba weFifa kanye okanye iBrazil eyayinqobile kathathu? "Lahla izimvo zakho ngezantsi emva kokufunda eli nqaku".
URonaldo Luis Nazario de Lima Ibali lokuBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -KwiBomiBogger Rankings
Emva kokuba ibhalwe phantsi kungekudala kathathu sele sele ekhona emsebenzini wakhe, ngoku uyazi ukuba uyavuya ekuboniseni ukungathandabuzeki kwabo. E-Ronaldo, sinomdlali oye wanyanzeliswa ukuba ahlaziye ngokutsha umdlalo wakhe kathathu walimala ngenxa yesigxina esingaphezulu kweenyanga ze-36. Yiloo nto esiyicinga ngaye kwii-rankings zethu ezingezantsi.
I-Inter Milan yeDlalo
I-PSV Eindhoven yeDayari yeBhola
Ukulungiswa kwephone I-5C Ngamana i-23, i-2018 Kwi-9: 13 am
Indlela yakho yokuxelela yonke into kule ngqungquthela ebhaliweyo iyinqabileyo, bonke bayakwazi
Ukungaqapheli kalula, Siyabonga kakhulu.
UDavid Araniva NgoJuni 24, 2018 Kwi8: 49 am
Loo mhle kakhulu. Ndiyayixabisa ukufunda ibali lakho. URonaldo usengumfana omkhulu. Ndiyabonga ukuxelela ibali lakhe.
Yh nabil Ngo-Okthobha i-5, i-2018 e-10: 50 pm
I-Cr9 yayiyinqanaba elinqabileyo elinqabileyo. Kwaye ngokwenene le ngqunqwana kwaye siyonwabile ngayo
I-Ronaldinho Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
I-Zinedine Zidane Ibantwana Ibali Plus Untold Biography Facts
Ibali lePele yaBantwana kunye ne-Untold Biography Facts